ए हजुर, तपाईंले सरकार देख्नु भयो ?
नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा शक्तिशाली ओलि सरकारसंग जनताका विशेष गरि म जस्ता युवाहरु जसमा केही गरौ भन्ने उर्जा छ। आज पनि बिदेशी कम्पनीहरुमा राम्रै मेहनत गरेर, राम्रै गरिरहेको छ, तिनिहरु स्थिर सरकारले केही गर्छ भन्नेमा आसाबादी थिए।
अपसोच, झन्डै ६० प्रतीशत बढी कार्याबधी सकिदा समेत केपि सरकारले कुनै उल्लेख्य काम गर्न सकेन। बरु देशको अर्थतन्त्र नै थप जर्जर बनायो। कालाबजारी, भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रले राम्रै मलजल प्राप्त गर्यो । फलस्वरूप आज देशमा आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। किन कि मान्छे भोको पेट बाच्न सक्दैन। बाच्यो भने आफ्ना बालबच्चाको भोको पेट देख्न सक्दैन र अन्ततः आत्महत्याको बाटो समात्न पुग्छ।
कोरोना महामारी भनियो लकडाउन गरियो तर त्यसले आम गरिब जनतालाइ आहात र बिचौलियाहरुलाइ राहत दिने बाहेक केही माखो मारेन। आज पनि अबस्था उहीँ छ। नक्कली कीट देखि लिएर आफु र आफ्ना मन्त्रीलाई झण्डा भएको मास्क छाप्न मै ओलि सरकार ब्यस्त छ।
कहिले राष्ट्रपतिलाइ करोडौंका कार्पेट फेर्ने, कहिले मन्त्रीलाई जिम खोल्ने त कहिले सर्प पाल्न नेताका नाममा खुलेका प्रतिस्ठानलाई करोडौं बाढ्ने बाहेक ओलि सरकारले आमजनताका लागि के गर्यो? आज पनि कृषक मल नपाएर पिडित छन। व्यावसायिहरु चर्को कर र यो लकडाउनको समयको बैंक किस्ता र लोनले प्रताडित छन। अब भन्नुहोस, यहाँ सरकार कहाँ छ? यति सार्है भ्रष्ट, गैरजिम्मेवार र फंटुस सरकार इतिहासमा तपाईले कहि कतै देख्नु भएको थियो भने कृपया मलाइ देखाइदिनु होला।
ट्यागहरू: # सरकार#तिलक
न्युजिल्यान्डमा बिद्रोह: लकडाउन, मास्क, भ्याक्सिन र स्यानिटाइजरको बिरुद्द जागे जनता
भदौ २९ आईतबार, तपाईंको आजको राशिफल